Vibenomics: ahaziri iche, Egwu dabere na Ọnọdụ na Izi ozi | Martech Zone
Prime Car Wash CEO Brent Oakley nwere nsogbu. Ọkwa ụgbọ ala ya kachasị dị egwu, mana ka ndị ahịa ya na-eche ụgbọ ala, ọ nweghị onye na-etinye ha na ngwaahịa na ọrụ ọhụụ ha ga-enye. Ọ mepụtara ikpo okwu ebe ọ nwere ike ịdekọ ozi nkeonwe, ozi dabere na ọnọdụ na egwu ndị ahịa ya.
Mgbe ọ malitere ịkwalite ihe ndozi ihu ikuku site na redio dị na ụlọ ahịa, ọ rere ọtụtụ ndị na-ehichapụ ya n'otu ọnwa karịa ihe ọ ga-ere n'ime afọ ise gara aga. Brent maara na ọ nweghị naanị azịza maka ndị ahịa ya, o nwere usoro ikpo okwu ụlọ ọrụ ahụ chọrọ. Yabụ, ọ hapụrụ azụmaahịa ụgbọ ala wee bupụta Vibenomics.
Vibenomics bụ usoro ntanetị mgbasa ozi n'ịntanetị na-enye ndepụta ọkpụkpọ egwu ahaziri iche na ozi na-akparaghị ókè, ozi edere edepụtara. Lelee ka sọftụwia ọhụrụ nke Vibenomics sọftụwia na-eme iji kee vibe pụrụ iche nke na-eme ka azụmaahịa azụmaahịa dị mfe ma dị irè.
Outletslọ ahịa na-ere ahịa na-akwụkarị ụgwọ maka ihe ngwọta egwu egwu, ma Vibenmoics na-enye egwu na egwu na azịza nke nwere nloghachi na ntinye ego.
Vibenomics na-enye ụlọ ọrụ ohere ịnweta ọbá akwụkwọ nke nwere ikikere zuru oke na egwu dị mfe iji ngwa na-enye ha ohere ido onwe ha n'okpuru na ịnata ọkwa ahaziri ahazi, nke edere aha ọrụ otu ụbọchị ịchọrọ. Lọ ọrụ achụmnta ego adịghị echegbu onwe gị gbasara bandwidth ma ọ bụ nsogbu teknụzụ - nyiwe na-agba na mbadamba Sprint. Naanị tinye ya n'ime, ma ị na-agba ọsọ!
Ọbụghị naanị na azụmaahịa nwere ike ibipụta ozi nke aka ha, ha nwekwara ike mepee netwọkụ ha maka ndị mgbasa ozi ndị ọzọ! Lelee ha ngwọta ịmụtakwu banyere ha nwere ike inyere gị ụlọ ọrụ.
Tags: oziMusicnetwọk redioọnụahịa mkpọsaụdịdị